တည်သီးကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ~ Myanmar News Agency
တည်သီးကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
6/14/2013 03:08:00 PM ကျန်းမာရေး No comments
တည်သီးမှာ ကက်တီချင်နဲ့ ဂယ်လိုကက်တီချင်တို့လို ကျန်းမာရေးအကျိုးပြု အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ ပါဝင်တဲ့အပြင် အကျိတ်ပြေပျောက်စေတဲ့ ဘီတူလင်းနစ် အက်စစ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကက်တီချင်ဓာတ်မှာ ကူးစက်ပိုး ကင်းစေတာ၊ ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျစေတာနဲ့ သွေးကြောက သွေးယိုစိမ့်မှု
မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတာ စတဲ့ အစွမ်းအာနိသင်တွေ ရှိပါတယ်။
အိုမင်းမှုနဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ဟန့်တားပေးပါတယ်
လတ်ဆတ်တဲ့ တည်သီးတွေမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဘီတာကယ်ရိုတင်း၊ လိုင်ကိုပင်း၊ လူတင်၊ ဇီဇန်သင်းနဲ့ ခရစ်ပတိုဇန်သင်းတို့လို အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဒြပ်ပေါင်းတွေ စုပေါင်းပြီး မကောင်းတဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို တွန်းလှန်ပေးတဲ့အတွက် အိုမင်းမှုကို ဟန့်တားပေးကာ ရောဂါဝေဒနာ အများအပြားရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။
အသက်ကြီးတာကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ မက်ကူလာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်
တည်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇီဇန်သင်းဟာ မျက်စိအာရုံခံလွှာရှိ မက်ကူလာမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ရရှိစေပြီး အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မက်ကူလာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု (AMRD) မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
တည်သီးမှာ အများအပြား ပါဝင်တဲ့အစွမ်းထက် အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ဗီတာမင်စီကြောင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အရေးပါတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်
လတ်ဆတ်တဲ့ တယ်သီးမှာ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနိစ်၊ ကြေးနီ၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ် စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်ပမာဏ ပါဝင်ပါတယ်။ မဂ္ဂနိစ်ဟာ ဖရီးရယ်ဒီကယ် ဖယ်ရှားရေးမှာ အစွမ်းထက်သလို ကြေးနီကလည်း အရေးပါတဲ့ အင်ဇိုင်းဖြစ်ကာ သွေးနီဥ ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
တည်သီးဟာ ဝမ်းလျှောတာကို ရပ်စေပြီး ချွေးထွက်နည်းစေကာ သွေးထွက်နေရင် နှေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်အေ ပါဝင်မှု မြင့်မားတာကြောင့် ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရှီဗြူတောနဲ့ ဘီတူလင်းနစ် အက်စစ်တို့ ပါဝင်တာကြောင့် ကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့လည်း ထင်ကြပါတယ်။
တည်သီးမှာ ဂလူးကို့စ်နဲ့ ဖရက်တို့စ် သကြားဓာတ်တို့ အများအပြား ပါဝင်တာကြောင့် သွေးကြောစနစ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှလုံးကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။
ဗီတာမင်ဘီအုပ်စု အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်
တည်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဖောလစ်အက်စစ်၊ ဗီတာမင် B6၊ သိုင်ယာမင်တို့လို ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဇီဝရုပ် ဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာ အင်ဇိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
တည်သီးဟာ အရေပြားအတွက်လည်း ကောင်းမွန်တာကြောင့် မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး အဖြစ် ထည့်သုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ တည်သီးကို ကြက်ဥအနှစ်၊ သံပရာရည်နဲ့ ရောမွှေပြီး မျက်နှာပြင်အနှံ့ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ၁၀ မိနစ်ကြာမှ ရေဆေးချလိုက်ရင် ချွေးပေါက်ကျယ်တာနဲ့ အရေးကြောင်း ထင်တာတို့ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဇွန်သဉ္ဖာက မှော်ဘီ GTC ကနေ B.E ရော M.E ပါဘွဲ့များပါ ရယူခဲ့ပြီးမှ မော်ဒယ်လ် လောကကို ၀င်ရောက်လာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တင်ကျလွန်းတဲ့ Sexy ဓ...
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ရတနာမိုင် ရဲ့ ဖလန်းဖလန်းဓာတ်ပုံတွေပါ
ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့ကထွက်ရှိတဲ့ ထိုင်း ဘုရင့်ထီပေါက်မဲအရ ထိုင်း ဘတ် ၂ သန်းဆုမဲဂဏန်း ၄၆၈၇၂၈ နဲ့ ကံထူးသူတဦးကတော့ ထိုင်း ဘတ်ငွေ ၈ သန်း ( ကျပ...
သစ်ပင် ပုံပြင် .. ရီရတယ် .. ဖတ်ကြည့် .
တစ်ခါက တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် ထူးဆန်းသောသစ်ပင်တစ်ပင် ပေါက်ရောက်လာသည်။ ထိုသစ်ပင် သည် ပိန္နဲပင်မျိုးဖြစ်သော်လည်း သရက်သီးကဲ့သို့ အသီးများသီး ထနေေ...
Sex ကိစ္စဆွဲဆောင်မူရှိအောင် ၀တ်ဆင်ထားသောမြန်မာ မိန်းကလေးတစ်ဦး From : ကျင်ဇော် လက်မထပ် ပဲ အတူနေ သည့် ဓလေ့ စရိုက် (Living Together) ...
Sexy လိုင်းကို ဇာဇာထက် ဘာကြောင့် ရွေးတာလဲ
ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတာတွေကို ငြင်းပယ်လိုက်တာဟာ Sexy (လိင်အသားပေး) ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပဲ အနုပညာ ခရီးလမ်းမှာ Professional ပီပီသသ ဆက်လျှောက်သ...
အနုပညာ နယ်ပယ်တွင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဖြစ်စေ အောင်မြင်မှုများ ရရှိပြီးနောက် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသည့် လူငယ်လူရွယ်များစွာ ရှိသည...
CES မှစိတ်ဝင်စားဖွယ် နည်းပညာပစ္စည်းအသစ်များ
မိမိဆီကို ၀င်လာတဲ့ အ၀င်ဖုန်းမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ပံ...
Gmail အကောင့်အတွက် ဖုန်းမလိုတဲ့ နည်းလမ်းသစ်ဖွင့်နည...
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိလည်း သံရုံးမှ C of I ပါရှိပါက...
Huawei အမျိုးအစားများအတွက် Firmware တင်နည်း မသိသေး...
အူမကြီးကင်ဆာ ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ငါး...
သင့်အသည်း ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး စွမ်းအင် အပြည့်အဝ ရ...
ပိုမို လှပကျန်းမာစေမည့် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း ၁၂ သ...
DESKTOP ပေါ် က ICONတွေ လှုပ်ရှာနေတဲ့စတိုင်းသုံးမယ်
Android Tuner Beta 0.7.2
Antivirus Version :6.2 free Download
GOOGLE က သန်းတထောင်သုံးပြီး ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ WAZE
နင့် ကို အရမ်းချစ်နေမိတဲ့ ငါလေ ........
LAPTOP သို့ PC တွင် RAM နည်းနေသူများအတွက် USB PEND...
WIRELESS ချိတ်ဆက်ပြီး ဖိုင်တွေ ရှယ်နိုင်မဲ့ ITWIN
၆ ပတ်၊ ၆ လ၊ ၆ နှစ် တဲ့ :P(ဟာသလေးနော်)
ဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ကျား နှင့် သ၀န်တိုတဲ့မိန်းမ
Facebook ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ
သိပ်လှတဲ့ ပုလိပ် မမများ..... ဂလု
မျှတခြင်း(or)ဇိမ်အရှိဆုံး(or) ချစ်သူကို သတိရခြင်း
MapsWithMe Pro, Offline Maps v2.4
မိမိ Email အကောင့်ထဲသို့ ပို့သည် Facebook မှ Notif...
Copyright © Myanmar News Agency | Powered by Blogger